नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह तराइका जिल्लाहरुको भ्रमणको सिलसिलामा चितवन पुगे !
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह तराइका जिल्लाहरुको भ्रमणको सिलसिलामा चितवन पुगे !
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह तराइका जिल्लाहरुको भ्रमणको सिलसिलामा आज चितवन पुगेका छन् । दिउंसो बुद्ध एयरको विमानबाट चितवन पुगेका ज्ञानेन्द्रलाई भरतपुर विमानस्थलमा शुभेच्छुकहरुले भव्य स्वागत गरेका छन् । पूर्व राजालाई स्वागत गर्न पञ्चे बाजासहितको टोली विमानस्थल पुगेको थियो । स्वागतमा सभासददेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको उपस्थिति रहेको थियो । पूर्व राजा आज पश्चिम चितवनको मेघौलीमा बास बसेका छन् । पूर्व राजा आउने भएपछि दिनभर भरतपुर विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था समेत निकै कडा पारिएको थियो ।